Ngwa kachasị mma ibudata egwu efu nke 2021 | Gam akporosis
Ignacio Sala | | Ngwa gam akporo, Egwu efu, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata egwu n'efu na ogo dị elu yana yana ihe mkpuchi ọba gụnyere, mgbe ahụ edere post a ọkachasị maka gị, ọ bụkwa na n'ime ya ị ga-enwe ike ịchọta ndị nke m bụ taa nke kacha mma ngwa ibudata free music taa.
Ewezuga ịkwado ha ma hapụ ha njikọ njikọ iji budata ihe ndị a abụọ na-akpali akpali ngwa ga-enyere gị download free music kpọmkwem na gị gam akporo ọnụNa njedebe nke post na vidiyo ahụ, m na-akọwakwa ma kwado bots kachasị mma ibudata egwu ozugbo na Telegram na-enweghị ibudata ngwa ọ bụla ọzọ.
enye: You nwere ike ịnwale Amazon Music Unlimited n'efu site na njikọ a.
1 Fildo, ndị kasị mma ngwa ibudata music na elu mma
2 Onye na -egwu egwu Huawei
5 Egwu Cloud NetEase
6 Obere ihe
7 Egwu Jamendo
8 Ngwa ige egwu na nkwanye n'efu
8.2 Egwu Cloud NetEase
8.3 Abụ egwu
8.4 Egwu Jamendo
9 Budata egwu efu na Telegram n'iji bọọlụ kachasị mma
Fildo, ndị kasị mma ngwa ibudata music na elu mma
Ọ bụrụ na ruo a nnọọ obere oge gara aga, ihe m bụ ndị kasị mma ngwa ibudata music ozugbo na anyị gam akporo bụ ngwa gọọmentị n'asụsụ Chinese nke Huawei Music, ugbu a kwagara nke abụọ, na-emeri egwuregwu ahụ n'ụzọ ọ bụla ukara ngwa nke Fildo.
Fildo bụ ngwa nke na-anaghị anabata ụdị ọdịnaya ọ bụla maka nbudata ozugbo site na sava ya, kama jiri nkwanye ihe nkesa egwu egwu dika Netease, VK egwu ma ọ bụ ọbá akwụkwọ egwu nke YouTube.
Site na Fildo anyị ga-enwe ike ịchọta ihe niile anyị na-achọ, n'agbanyeghị agbanye ọhụụ, nke a na kedu ka ọ ga - esi bụrụ ụzọ ọzọ, nnukwu oge ahụ niile na - anaghị agwụ.
Na vidiyo agbakwunyere m kọwara esi budata ngwa a, otu esi eji ya na ihe nile n’enye anyi yana m na-egosi gị ka esi arụ ọrụ iji budata egwu ahụ niile masịrị anyị ka anyị wee nwee ike ige ya ntị na enweghị njikọ netwọkụ.
Ewezuga nke a na uru agbakwunyere, bụ nke ahụ Site na ngwa Fildo gọọmentị maka gam akporo anyị ga-enwe ike ige egwu na-amasị anyị na ntanetị.
Budata Fildo maka gam akporo site na njikọ a.
Onye na -egwu egwu Huawei
Huawei Music Player na-abụụrụ m otu nke kachasị mma ngwa ibudata egwu efu na gam akporo anyị, ngwa ngwa gọọmentị nke Huawei maka njedebe ya nke a na-ere na China na nke ahụ Naanị ụdị nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na mpụga mpaghara Asia bụ nke emere na August 2016 y nke ị nwere ike ibudata na otu njikọ a.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ etu o si arụ ọrụ nke ọma, otu esi budata ma wụnye ya, naanị ị ga-elele vidiyo m hapụrụ na mbido post a. Ngwa na Ọ bụ ezie na nkwenye ndị na-egosi na ihuenyo ụlọ si n'aka ndị na-ese ihe na China na ọ bụ ya mere ha ji nọrọ na Chinese, njikwa ọrụ ha dị n'asụsụ Bekee na ọ dị mfe, na kensinammuo iji.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu ngwa ngwa Huawei Music Player na ihe niile ọ na-enye anyị, ị nwere ike lee vidiyo na-esonụ nke m mere oge ụfọdụ gara aga nke m na-akọwa ihe niile na-adọrọ mmasị na ngwa a na-akpali akpali maka gam akporo na-enye anyị.
Budata Huawei Music Player ebe a.
Isi ọrụ anyị na-ahụ na Snaptube bụ ibudata vidiyo YouTube, vidiyo anyị nwere ike ibudata na mkpebi dị iche iche na nke anyị nwere ike mechara wepụ ọdịyo na ha ịge ha ntị na ebe ọ bụla anyị chọrọ n’enweghị iji ọnụego data anyị. Naanị njedebe dị na nchekwa nke ngwaọrụ anyị.
Iji gbochie ngwaọrụ anyị ka ọ ghara ijupụta vidiyo na ngwa ngwa anyị nwere ike ghara ịlele ọzọ, anyị nwere ike ozugbo ibudata ọdịyo na MP3 formatIji mee nke a, mgbe ịpị bọtịnụ ibudata, anyị ga-pịa nhọrọ Họrọ mkpebi ma họrọ MP3.
Snaptube ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ibudata vidiyo YouTube iji wepụ ọdịyo na usoro mp3 ma emechaa, mana anyị nwekwara ike iji ya budata vidiyo ọ bụla na nyiwe ndị ọzọ dị ka Facebook, Instagram, Veo, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Soundcloud ...
Ngwa a adịghị, maka ebumnuche doro anya, na Storelọ Ahịa Play, n'ihi ya, anyị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ntinye nke ngwa sitere na isi mmalite. Dị ka ọtụtụ ngwa anaghị adị na Storelọ Ahịa Play, Snaptube na-egosipụta usoro ọkọlọtọ ka onye nrụpụta wee nwee ike jigide ngwa ahụ site na mgbasa ozi.
Budata Snaptube maka gam akporo
YTD 2 bụ ngwa nke soro otu ihe ọmụma dị ka Snaptube, ebe ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ibudata vidiyo nke ndị ọkacha mmasị anyị kachasị amasị, kamakwa na-enye anyị ohere ibudata egwu kachasị amasị anyị na mp3 na usoro m4a ngwa ngwa na mfe.
Isi mmalite nke ị na-enweta ma vidiyo na egwu ahụ bụ YouTube, dị ka Snaptube. N'adịghị ka Snaptube, YDT 2 na-enye anyị nhọrọ abụọ mgbe anyị nwere mmasị na abụ: budata vidiyo ma ọ bụ ọdịyo, nke na-eme ka usoro nbudata egwu ahụ dị ngwa ngwa, dị mfe ma dịkwa nhịahụ.
Ọ bụrụ n’anyị chọrọ ibudata egwu kacha ada na mba anyị, anyị nwere ike ịnweta ndepụta ebe Egwu ndị kacha egwu na mba dị iche.
YTD 2 adịghị na Storelọ Ahịa Play, nke ga-amanye anyi ime ka ntinye nke ngwa site na isi mmalite. Anyị nwere ike ibudata ngwa ahụ ozugbo weebụsaịtị nke onye kere ya. Ngwa a jikọtara obere ọkọlọtọ na ala nke ngwa ahụ na mgbakwunye na mgbasa ozi ihuenyo zuru oke, ọkọlọtọ na mgbasa ozi na-anaghị emetụta ọrụ nke ngwa ahụ mana kwe ka onye nrụpụta ahụ nweta mmelite.
Egwu Cloud NetEase
Ngwa NetEase Cloud Music, nke otutu na-ezo aka Chinese Spotify, bụ ihe ọzọ magburu onwe ngwa anyị nwere iji mee ka anyị nwee ọ enjoyụ egwu kachasị amasị anyị n'ebe ọ bụla anyị nọ yana na anyị ebudatara na mbụ site na njikọ Wi-Fi (ọkacha mma iji chekwaa data mkpanaka).
Ngwa a, nke na-adịghị na Storelọ Ahịa Play maka otu ihe kpatara Snaptube, etoola kemgbe ọtụtụ afọ ma ugbu a na-enye anyị katalọgụ karịrị ọtụtụ na ebe anyị nwere ike ịchọta abụ ọ bụla na-abata n'uche. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ibudata egwu ndị ahụ, kamakwa na-enye anyị ohere igwu ya site na iyi.
para budata ngwa a (na mbụ anyị ga-arụ ọrụ ntinye nke ngwa site na isi mmalite) ị ga-aga njikọ ọzọ wee pịa mbipute kachasị ọhụrụ iji bido nbudata ngwa ahụ.
TinyTunes kpamkpam ewepụta imewe n'akụkụ na-enye anyị ihe ga-ekwe omume nke budata egwu obula anyi na acho ma ọ bụ na anyị chọrọ na ngwaọrụ anyị. O nwere nnukwu nchekwa data ebe anyị nwere otu mkpokọta anyị nwere ike ịchọta na ntanetị egwu egwu ọ bụla (na-echekwa ebe dị anya).
Ọ na-enye anyị ohere ịbanye Kasị egwuri egwu na ọba na iTunes yana mbipụta ọhụrụ, 100 hits nke oge ahụ dị ka akwụkwọ akụkọ Billboard, ụdaolu ... O nwere taabụ ebe anyị nwere ike ịnweta egwu niile anyị ebudatara, egwu ndị anyị nwere ike igwu site na ngwa ahụ n'onwe ya.
TinyTunes adịghị dịkwa na Storelọ Ahịa Play (rụọ ọrụ ntinye nke isi mmalite amaghi tupu ị wụnye ya), yabụ anyị ga-abanye na ibe weebụ ndị ọzọ Kedu ka o si aga. Ngwa a na - agbakwunye ọkọlọtọ mgbasa ozi na ala ihuenyo ahụ, ọkọlọtọ anaghị emetụta arụmọrụ nke ngwa ahụ n'oge ọ bụla ma mgbe ụfọdụ na - egosi mgbasa ozi na ihu zuru oke.
Jamendo Music bụ kpam kpam free ngwa na na-enye anyị ohere ịnweta ihe karịrị egwu 500.000, egwu anyị nwere ike ibudata na otu aka. N'adịghị ka nyiwe ndị ọzọ, na Jamendo Music anyị nwere ike ịchọta nọọrọ onwe ha egwu, ya mere obu ihe ozo di nma ichoputa egwu ohuru na otu.
Ihe ọzọ anyị nwere bụ ikwe ka anyị na-enwere onwe anyị egwu na-enweghị atụ Lọ ọrụ redio 13 nwere ụdị dị ka: Lounge, Electro, Hip Hop, Onye na-agụ egwu, Egwu Worldwa, Jazz, Oge gboo, Pop na Rock. Ngwa ahụ na-arụ ọrụ n'okirikiri, yabụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị anyị na ihuenyo ahụ, dị ka a ga - asị na ọ bụ ngwa egwu egwu.
Developer: Jamendo Otu
Ngwa ige egwu na nkwanye n'efu
Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ ndị ọrụ na-anwa ịchọta ụkwụ atọ na pusi site na ịchọ ngwa iji nwee ọ musicụ egwu kachasị amasị ha na-enweghị ilebara usoro ntanetị kachasị anya. Spotify na-enye anyị ohere inweta ya dum n'elu ikpo okwu music free na mgbasa ozi, na mgbasa ozi na-adabere na oge nke ụbọchị, nwere ike ịbụ karịa ma ọ bụ na-erughị ọtụtụ.
N'ezie, ọ bụrụ na ị na-achọ otu egwu egwu iji egwu site na akaụntụ efu, Spotify abụghị ihe ị na-achọ, ebe ọ bụ na nhọrọ ahụ ọ dị naanị site na ụdị ụgwọ ọnwa. Maka ihe ọ bụla, Spotify bụ nhọrọ magburu onwe ya iji tụlee ịnụ ụtọ egwu anyị na nkwanye.
Spotify: egwu na pọdkastị
Offọdụ ngwa m kpọtụrụ aha na ngalaba gara aga nke na-enye anyị ohere ibudata egwu kachasị amasị anyị na mp3, na-enyekwa anyị ohere ịnụ ụtọ ya site na iyi, na-enweghị ibudata faịlụ ọdịyo na ngwaọrụ anyị, yana nchekwa nchekwa nke a gụnyere.
Nke a Chinese Spotify, dị ka a na-akpọ ya kemgbe ọ bịara n'ahịa karịa 5 afọ gara aga, na-enye anyị ihe dịka otu katalọgụ ahụ anyị nwere ike achọtara n'ọtụtụ nyiwe egwu na-egwu egwu.
Iji budata NetEase Cloud Music, ị nwere ike ime ya ozugbo site na njikọ a, kemgbe ngwa Enweghị ya na Storelọ Ahịa Play.
Nhọrọ ọzọ anyị nwere, ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ Prime, bụ Amazo Prime Music, ọrụ nkwanye egwu Amazon maka ndị ọrụ Prime. Ọrụ a na-eme ka ndị ahịa ya niile nweta ya ihe karịrị nde 2 na ọtụtụ narị egwu ọkpụkpọ na ọdụ na-enweghị mgbasa ozi ọ bụla. Ke adianade do, ọ na-enye anyị ohere ibudata ọkacha mmasị anyị songs-enwe ike ige ha ntị n'ebe ọ bụla anyị na-enweghị mkpa maka njikọ internetntanetị.
Egwu Amazon: Gee ntị pọdkastị na egwu ọhụrụ
Ogwe egwu egwu Jamendo Music, dịka m kwuru na ngalaba gara aga, na-elekwasị anya n'inye onyinye egwu sitere na aha ejiri mara, Aha mmado na-enweghi ike nke nnukwu aha na ndị na-achọ ụzọ iji mee ka ụdị ngwa ndị a mara ha.
Egwu Jamendo abughi nani ka anyi budata egwu kacha masị anyi, kamakwa -enye anyị ohere na-enwe site gụgharia nke katalọgụ dị site na ngwa anyị nwere ike ibudata ozugbo na Storelọ Ahịa Play site na ịpị njikọ ndị a.
Budata egwu efu na Telegram n'iji bọọlụ kachasị mma
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Telegram, ị maara n'ezie na site na ngwa ahụ n'onwe ya, ma ọ bụ site na gam akporo, iOS, OSX, Linux, Windows ma ọ bụ site na webụsaịtị nke ihe kacha mma ngwa ngwa ngwa ngwa niile, anyị ga-enwe ike jiri bots iji chọọ na budata egwu di elu kpamkpam n'efu na site na ngwa Telegram n'onwe ya-
Isonye na Obodo Androidsis, na ịpị otu njikọ a, ị nwere ike ịchọta otu bọtịnụ bọtịnụ nke, dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo ahụ dị n'elu akara ndị a, anyị na-enye gị njikọ njikọ iji malite bots egwu kacha mma maka Telegram na ị na-amalite ịnụ ụtọ ihe niile ngwa ahụ na-enye anyị, ngwa nke karịrị ihe ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na-enye anyị, nke ahụ bụ na Telegram bụ ọdịnihu ga-emezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kacha mma iji budata egwu efu
Lụọ ọgụ na-amaghị ama wakporo inwa na Earth Wars
Wiko View4 Lite dị ugbu a na Spain: panel 6,52, okpukpu atọ azụ na gam akporo 10